Ihe nchọgharị weebụ iji wepu njikọ niile site na ibe - ndụmọdụ gbasara ihe omimi
Iwepu njikọ site na ibe weebụ enwere ike. Ị ga-edetuo njikọ ndị ahụ achọrọ dị n'otu n'otu, ọ bụkwa ihe dị oke egwu ma dị njọ. Otú ọ dị, e nwere ụfọdụ mmemme weebụ iji wepụ njikọ niile site na weebụsaịtị na blọọgụ gị chọrọ n'enweghị nsogbu ọ bụla - hairstyles fascinator. Nke kachasị mma bụ na mmemme ndị a nwere ike ịgbakwunye gị IE, Firefox, Chrome, na ihe nchọgharị Safari.
IWebTool Link Extractor bụ software na-ewu ewu na weebụ yana mgbatị Firefox. Ọ ga-enye aka ibudata data gị ozugbo na akụrụngwa gị. Ozugbo arụnyere ma rụọ ọrụ, usoro a ga-eme ka usoro nchịkọta ahụ dịkwuo mfe ma na-emegharị. Iwepụ data site na listi ozi ọma, ọpụpụ njem na saịtị ntanetịahịa adịghị mfe. Site na ngwanrọ a, ị nwere ike ịrụ ọtụtụ ihe aga-eme n'enweghị ihe ọ bụla. Ọ na-enye naanị arịrịọ ise kwa awa ma mara ọrụ ahụ iji rụọ ọrụ nke ọma. Ụfọdụ n'ime nhọrọ ndị a ma ama bụ Mpempe akwụkwọ na ngigide na mkpirisi nhọrọ Google Page-Rank.
2. Njikọ Njikọ:
Ọ bụghị naanị Firefox tinye-ma mana usoro ihe omume weebụ magburu onwe ya. Ọ na-ewepụ njikọ ma wepụ data gị site na saịtị akụkọ, ntanetị RSS, blọọgụ na mgbasa ozi mgbasa ozi na-enweghị ihe ọ bụla. Ọ na-enye nhọrọ iji dozie data dabere na ihe ya na ihe ị chọrọ. FireLink Report na-arụ ọrụ site n'ịkọcha njikọ na imelite datasets.
SEM Link Extractor bụkwa onye a ma ama maka njiko njikọ ya na ihe nchọgharị weebụ. Ọ bụ otu n'ime usoro kachasị mfe na kachasị mma iji wepụ njikọ niile sitere na ibe weebụ. Dashboard anya ya ga-eme ka usoro nchịkọta gị dịkwuo mfe. Ma ịchọrọ iwepụ data site na njikọ dị mfe ma ọ bụ mepụta ọrụ mgbagwoju anya data na-ezute, usoro a ga-eme ihe niile maka gị n'enweghị nsogbu ọ bụla.
SEOquake Link Extractor bụ ngwa ọzọ web-based. Ọ dịghị achọ nbudata, ị ga-enwetakwa uru site na ya n'ịntanetị. Ọ na-enyere gị aka wepu njikọ niile sitere na ibe weebụ ma na-eziga na fetches na oge data. Nke a ga - egosiputa akụ njikọ dịka ibe weebụ Google na ibe ibe edokọbara.
6. OutWit Hub Extractor: